Makore 159 aArthur Conan Doyle. 6 zvidimbu zvemabasa ake. | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela, Nyaya, Zvinotyisa
Hazvina basa kuendesa ku Arthur conan doyle panguva ino. Nhasi Chivabvu 22 tinopemberera ake Makore makumi manomwe ekuberekwa. Ini ndichango rangarira zvishoma izvo Conan Doyle aive munyori ane mukurumbira weBritish uye chiremba, Scottish kunyanya. Musiki weiyo inimitable mutikitivha Sherlock Holmes, Akasiya mushonga kuti atarise pane rake basa semunyori. Uye zvakare, iye akanyorawo akawanda mabasa senge sainzi ngano nyaya, nhoroondo yenhau, nhetembo uye theatre.
Zvese zvavo, asi kunyanya zveHolmes, zvisingaverengeke mafirimu vhezheni akagadzirwa na zviso zvakawanda zvemutikitivha wekare inonyanya kuzivikanwa pave paine uye yekuve. Iyi ndangariro inoenda pamwe chete 6 zvidimbu Zvemabasa ake Dzidza muScarlet, Chiratidzo chemana, Kunyadzisa muBohemia, Iyo imbwa yeBaskervilles, Beach Star y Iko Kunakidzwa kwekufa Detective.
1 Dzidza muScarlet
2 Chiratidzo chemana
3 Scandal muBohemia
4 Imbwa yeBaskervilles
5 Nyeredzi yesirivha
6 Iko Kunakidzwa kwekufa Detective
Holmes anga asiri murume wehupenyu husina kurongeka; ane mwero munzira yake yekuve, akajairwa mutsika dzake, aisawanzoenda kunorara mushure megumi o'clock husiku, pandakasimuka, anga atobuda mumba mushure mekudya chikafu chake chamangwanani. Zuva racho rakapedzerwa pakati pekemikari murabhoritari uye dissection imba, dzimwe nguva kutora nzendo refu, kazhinji nguva dzose kumucheto kweguta. Iwe haugone kuumba zano rezviitiko zvako pawaive mune imwe yenguva dzekunakidzwa. Imwe nguva yakapfuura, maitiro akauya, uyezve mazuva ese, kubva mambakwedza kusvika manheru, airara pamubhedha, asingafambire uye asina kana kutaura. Meso ake akatora chirevo chisina kujeka uye chekurota zvekuti chero munhu angadai akamutora kunge benzi kana kupenga dai hunhu hwake hwakadzikama uye hunhu hwakakwana hwehupenyu hwake hwainge husiri kuratidzira kwakadai kufungidzira kwakadai.
Sherlock Holmes akanhonga vial kubva pakona yemantel ndokubvisa hypodermic sirinji kubva mune yayo yakanaka moroko kesi. Akaisa tsono isina kusimba nezvigunwe zvake zvirefu, zvichena, zvekutya, ndokumonera ruoko rweruboshwe rwehembe yake. Kwenguva pfupi, maziso ake akazorora achifungisisa pamhasuru ruoko uye ruoko, zvese zvakafukidzwa mumadota uye mavanga kubva kune zvisingaverengeke punctures. Pekupedzisira, akadzingira pfumo rakapinza munyama, akatsikitsira pasi pakaponeti kadiki, ndokudzokera kumashure, achinyura muchigaro chakafukidzwa nevelvet uye achifemera kunze kugomera, kugutsikana.
Kuna Sherlock Holmes anogara ari "mukadzi." Handina kazhinji kumunzwa achizvitaura nerimwe zita. Mumaziso ake anojekesa huwandu hwepabonde rake uye anohupfuura. Uye zvaisave zvekuti akanzwa kuna Irene Adler kunzwa kwakafanana nerudo. Manzwiro ese, uye iyi kunyanya, yaiita senge inosemesa kune yake inotonhora, chaiyo, inoyemurika pfungwa yakaenzana. Ini ndinomutora semuchina wakakwana kwazvo wekufunga uye wekucherechedza pasi rose rakamboziva, asi semudiwa angadai asina kuziva mashandiro. Haana kumbotaura nezve zvinyoro nyoro, kunze kwekutsvinya uye nekuzvidza. Idzo dzaive zvinhu zvakakosha kumucherechedzi, zvakanakisa kusimudza chifukidziro chinofukidza zvinokurudzira zvevanhu nezviito. Asi kune iye akafunga zvine mutsindo, kubvuma kupindira kwakadaro mune yake yakapfava uye yakanyatsogadziriswa hunhu kwaireva kuunza chinokanganisa chinhu chinokwanisa kukanda kusahadzika pane zvese mhedziso dzepfungwa dzake.
"Watson, uri kuzvikunda chaizvo," akadaro Holmes, achidzosera chigaro chake nekubatidza mudzanga. Ndinofanira kureurura kuti pese pawakaongorora kubudirira kwangu kudiki, unozvidza kugona kwako. Inogona kunge isina kunyanya kujeka, asi inogadzirira nzira kubwinya kwevamwe. Kune vanhu avo, vasina kukura ivo pachavo, vane simba rinoshamisa rekusimudzira hunyanzvi. Ndinoreurura, shamwari inodikanwa, kuti ini ndiri muchikwereti chako.
"Iyi ndeimwe yezviitiko zvekuti munhu anofunga anofanirwa kushandisa hunyanzvi hwake kusefa izvo zvinozivikanwa kuti awane ruzivo pane kutsvaga zvitsva." Uku kwave kuri nhamo saka kubva pane zvakajairika, zvakakwana uye zvakakosha, zvakavanzika kuvanhu vazhinji, zvekuti tinozviwana tichitambura kubva kune yakawanda yekufungidzira, fungidziro, uye fungidziro. Chinhu chakaoma apa kusunungura mafupa ezvokwadi ..., echokwadi uye chisingarambike chokwadi ..., chese chinhu chisiri chinhu kunze kweaororist nevatori venhau. Chiito chinoramba chichienderera, chakanyatsogadzikwa panheyo yakasimba iyi, chisungo chedu kuona kuti ndeipi mhedzisiro inogona kutorwa uye ndeapi mapoinzi akakosha anoumba axis yezvakavanzika zvese.
Iko Kunakidzwa kwekufa Detective
Mai Hudson, mubatsiri waSherlock Holmes, vaive neruzivo rwekutambura. Haana kungowana pevhu rake rekutanga rakapindirwa nguva dzese nemapoka evasina kujairika uye kazhinji vasingadiwe, asi muenzi wake akakosha airatidza kusagadzikana uye kusagadzikana kwehupenyu izvo pasina mubvunzo kwaifanira kuisa kushivirira kwake pamuedzo. Kusanzwisisika kwake kusinganzwisisike, kuda kwake mimhanzi panguva dzisingazivikanwe, kudzidziswa kwevapanduki nguva nenguva mumba, kupenga kwake uye kazhinji kunhuhwirira kwesainzi, uye mamiriro echisimba nenjodzi yakamufukidza, zvakamuita muridzi wakaipisisa muLondon. Pane kudaro, mubhadharo wake waive wemuchinda. Handina mubvunzo kuti ndingadai ndakatenga imba nemutengo wakabhadharwa naHolmes kumakamuri ake mumakore andaive naye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Makore 159 aArthur Conan Doyle. 6 zvidimbu zvemabasa ake.